Mediatioran’ny Repoblika : tsy ampy ny enti-manana amin’ny asa | NewsMada
Mediatioran’ny Repoblika : tsy ampy ny enti-manana amin’ny asa
Tsy ampy ny vola enti-manana amin’ny asa, izay efa voasoratra ao amin’ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana. Eo anelanelany eo, rehefa mirotsaka ny vola: misy lalàna mivoaka amin’izay azo ampiasaina, izay mihakely mihakely…
Izay ny fanazavan’ny mediatioran’ny Repoblika, Esoavelomandroso Andréas Monique, ny amin’ny olan’ny andrimpanjakana tarihiny. Tamin’ny fanaovana tatitra, taona 2016, teny Isoraka, omaly, izay. “Tsy afa-mandamina ny asa tokony hatao izahay, tsy afa-mandeha any ivelan’Antananarivo”, hoy izy.
Mpanelanelana ny mediatiora, tsy hoe manelanelana amin’ny ady fa fanelanelanana eo anivon’ny andrimpanjakana: manamora ny fahazoan’ny vahoaka ny fahafantarany ny asam-panjakana.
Mifanerasera isan’andro amin’ny mponina sy ny vahoaka ny mpiasam-panjakana. Izay fifandraisana izay no anaovan’ny mediatioran’ny Repoblika fanelanelanana. Raha misy zavatra manelingelina amin’ny fanatanterahana ny asa izany, ka tsy miantefa hatramin’ny vahoaka izay tokony hiantefan’ny asa.
Mahabe fitarainana ny fisotroan-drononon’ny mpiasa
Miisa 177 ny fitarainana voarain’ny mediatioran’ny Repoblika, taona 2016. Betsaka indrindra amin’izany ny momba ny fahazoana fisotroan-dronono. Sahirana ny vadin’ny mpisotro ronono, rehefa maty ny vadiny izay mandray fisotroan-dronono. Sahirana amin’ny fitadiavana taratasy maro samihafa izy ireo, alohan’ny hahazoany fisotroan-dronono.
Nahazoana fitarainana koa ny momba ny tsy fandoavan’ny orinasa ny latsakemboka amin’ny Cnaps, ny ady tany. Fitarainana no tonga ao amin’ny mediatiora, fa tsy hoe te hitsabaka amin’ny asam-panjakana izy.